Nin 63 Dal ugu Safray si uu Helo Galley (Arabikhi) uu Cuno oo Raalligelisa | stn radio	Friday, November 28th, 2014	Home
Nin 63 Dal ugu Safray si uu Helo Galley (Arabikhi) uu Cuno oo Raalligelisa
Feb 14, 2013 - Aragtiyood	Nin aad u jecel arabikhida ridqan ee ku jirta karaatoonka, ayaa hanti dhan ?36,800 lacagta Ingiriiska ah ku kharash-gareeyey 63 dal oo adduunka ah sidii uu uga heli lahaa arabikhi damcad ahaan iyo tayo ahaanba raalligelisa dookhiisa.
Mr. Mick Hobbay oo 33 jir ah, ayaa safar arabikhi-raadis ah oo uu ku maray shanta qaaradood ee adduunka ugu waaweyn waxa uu ku cunay 4,000 kartoon oo gelley shiidan ah.
Ninkan oo safarkiisu qaatay 10 sanno waxa waddan kastoo uu tagaba ka cunayey arabikhida waddaniga ah ee dalkaas ka baxda, isagoo sheegay inuu aakhirkii gelley raalligalisay naftiisa ka helay Hindiya oo uu sannadkii la soo dhaafay socdaalkiisa ku maray.
Waxa kaloo ninkani sheegay in arabikhida uu safarka dheer oo kharash badan kaga baxay ku raadinayey ahayd mid madow, ifaysa, aad u adag, dalkaasna si maxalli ah uga baxda, waxaannu xusay inu galley jaban ka helay qaaradaha Afrika iyo Eshiya, balse aan dhadhan ahaan isaga cajabin.
Mr. Mick ayaa warbaahinta caalamka u sheegay inuu jacaylka arabikhida bilaabay markii da?diisu ahayd 10 jir oo uu ku quraacan jiray, halka uu imminkana quuto saddexda waqtiba, kuna darsado caano iyo sonkor.
Dalalka kala duwan ee ninkani safarka cajiibka ah ku maray waxa ka mid ah; Mexico oo September 2002 uu tegay, Mali, Brazil, Thailand, Switzerland, Fransiiska, Masar iyo dalal badan oo kale.
?Waxaan u noolahay inaan u safro, booqdana dal kastoo adduunka ah, waxaanan doonayaa inaan safarkayga ka dhigo mid cajiib ah, sidaa darteed waxaan eegayey waxyaabaha u jecelahay cunista arabikhida iyo in aan dal kasta tijaabiyo gellaydiisa.
Cunista gellayda karaatoonka ku jirta ee shiidan waxaan bilaabay inaan ku quraacdo anigoo aad u yar, balse waqtigan waxaan cunaa in ka badan saddexda waqti ee caadiga ah.
Dalalka aan booqday way ku kala duwanaayeen arabakhida cunisteeda, isku midna may ahayn mid ahayn noocyada ka baxaa. Afrika waxaan ugu tegay arabikhi adag oo lagu darsado caanaha adhiga, welina waan ku guda jiraa raadinteeda cuntadii i qanqlin lahayd oo arabikhi ka samaysan,? ayuu yidhi ninkan safarka la yaabka leh ku maray dunida.